ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ): ကိုဝေရဲ့ ခုတစ်လော (တဂ်ပို့စ်)
ကိုဝေရဲ့ ခုတစ်လော (တဂ်ပို့စ်)
အစ်မကြီး မန်းညချိုး နှင့် ညီငယ် နွလေ တို့က ဘလော့ဂ်ဂါများကို တဂ်သည်ဟု ဆိုသောကြောင့် ဘလော့ဂ်ဂါမဟုတ်ဟု သမုတ်မည် စိုးကာ ကသုတ်ကရက် ရေးပါသည်။
လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြမ်းဖက် ပဋိပက်ခတွေ အလျင်မြန်ဆုံးချုပ်ငြိမ်းပြီး ကျီးလန့်စာစားနေထိုင်မနေရဘဲ အားလုံး အရင်အတိုင်း အေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်ရမယ်ဆိုရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးနေမိတယ်။
စိတ်ခံစားချက်ကို ဦးစားပေးလွန်းပြီး တစ်ခုခုဆို ဒေါသကို မထိန်းနိုင်ဘဲ ရှူးရှူးရှားရှားဖြစ်လွန်းတယ်၊ ဒါကြောင့် သတိလေးကပ်ပြီး ဘယ်အရာကိစ်စကိုမဆို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြေရှင်းတုံ့ပြန်နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ဆင်ခြင်မိတယ်။
ကောင်းတယ်ပဲ ပြောရမယ်ထင်ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ၀ိတ်က တော်တော်တက်နေတော့ အိပ်ရာပေါ်လှဲလိုက်တာနဲ့ လူက လေးလံပြီး နေလို့ ထိုင်လို့ မကောင်းတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ အိပ်ပဲ အိပ်ချင်နေတော့တာလဲ အပါအ၀င်။
လောလောဆယ် ဦးနုရဲ့ တာတေ စနေသား၊ ဆရာကြီးဦးအောင်သင်းရဲ့ အောင်သင်းအကြိုက်ဆုံးဝတ်ထုတိုများစာအုပ်။
အိပ်ရာရယ်၊ တီဗီရှေ့ရယ်၊ ထမင်းစားပွဲရယ်၊ စာအုပ်စင်ရယ်၊ စာရေးစားပွဲရယ်
Adele ရဲ့ Rolling in the Deep၊ Jason Mraz ရဲ့ I am yours ။
ကဗျာဆရာကြီးတင်မိုးရဲ့ ** မိုးမသောက်တဲ့ နှစ်များ ** ကဗျာ
စာတွေ အေးအေးလူလူဖတ်ရင်း၊ ရေးချင်တာလေးတွေ စိတ်ရှိ လက်ရှိရေးရင်း၊ သတင်းလေးတွေ တတ်နိုင်သမျှ လိုက်ရင်း ဘ၀ကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြတ်သန်းချင်နေမိတယ်။
ထမင်းဟင်းနဲ့ နွားနို့၊ ဒိန်ချဉ်။
လောလောဆယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ ကျီးလန့်စာစားနေနေကြရတဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေကို….
ဒုတိယနှစ် ပထမအဖြတ် နှစ်စပိုင်း အချိန်ကာလတွေကို….
အထူးတလည် မေ့လျော့ပစ်နေဖြစ်တာ မရှိပါ။
အကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ လုပ်ရပ်၊ အကြမ်းဖက်မှုကို လှုံ့ဆော်တွန်းအားပေးနေကြတဲ့ စကားလုံးတွေ၊ လူပုဂ်ဂိုလ်တွေနဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို….
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသာ လောလောဆယ်ရှိရင် ကောင်းမယ်လို့ နင့်နင့်နဲနဲ တမ်းတနေမိတယ်။
တရားမျှတဲ့ ၊ အစွန်းမရောက်တဲ့ အတွေးအမြင်တွေ၊ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို မိမိခံယူချက်နဲ့ မိမိ အများသူငါ ဖတ်နိုင်ဖို့ ရေးသား တင်ပြပေးနေတဲ့လူတစ်ယောက်။
ခုတစ်လောမှာ အပြောနဲ့ အလုပ် သိပ်မညီချင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်…
ဆူဆူပူပူ၊ ညံညံပွက်ပွက် ဖြစ်ေ်နတဲ့ နေရာမှန်သမျှ….
စာတွေ အများကြီးဖတ်၊ စာတွေ အများကြီးရေးချင်
အကြောင်းကိစ်စတစ်ခုကို သေသေချာချာမလေ့လာဘဲ သူများ ပြောစကားကို မျက်စိစုံမှိတ် လက်ခံ နားယောင်ပြီး မသိနိုးနားနဲ့ ဟောင်ဖွာ ဟောင်ဖွာ လုပ်နေတဲ့လူတွေ….
ရင့်ကျက်တဲ့ နိုင်ငံသားအသိစိတ်ဓါတ်မရှိတဲ့ နိုင်ငံသားဆိုသူတွေ….(အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ်ဓါတ်ကို ရင့်ကျက်အောင် မွေးမြူပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်ပါအပါအ၀င်…)
ဖွဘုတ် (ခေါ်) Facebook
ရင့်ကျက်ပြည့်ဝလှတဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ အသိဥာဏ်၊ ပြည့်စုံကုံလုံလှတဲ့ ပညာ
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲတွေ၊ လက်ရှိ နိုင်ငံတွင်းက မတည်မငြိမ် ဆူပူလှုပ်ရှားနေတဲ့ အရေးအခင်း၊ ပဋိပက်ခ၊ စစ်ပွဲတွေ၊ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ အတိုက်အခံကြားက ဘာညာ ဘာညာတွေ….( ခြုံပြောရရင် လက်ရှိ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းတွေ)
“Blogger အစ်ကို အစ်မ မောင်ငယ် ညီမငယ်လေးများဆီသို့ တဂ်ပါသည် ...” ဟုဆိုသော အစ်မကြီး မိုးညချမ်းနှင့် မဆိုစလောက် လပိုင်းငယ်သော ညီငယ် နွေလတို့က ဘလော့ဂ်ဂါများကို တဂ်ပါသည်ဟု ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ပါသောကြောင့် ဘလော့ဂ်ဂါမဟုတ်ဟု သမုတ်မည်စိုးသဖြင့် ကတိုက်ကရိုက် ရေးလိုက်သားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း။
စာတွေ မတင်ဖြစ်တာ တစ်လလောက်ကြာသွားတဲ့အတွက် ၊ မိတ်ဆွေများနဲ့ ဝေးကွာနေရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါ။ မကြာခင် တတ်နိုင်သလောက် စာလေးတွေ ရေးပြီး ချစ်ခင်ရပါသော မိတ်ဆွေများနှင့် ပြန်လည် ထိတွေ့သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
Posted by ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ) at 4:09 PM
နွေလ March 30, 2013 at 4:59 PM
ဝိုင်မိုးနေက ခေါ်လို့ ကောင်းပေမဲ့
နွလေ က ခေါ်လို့ ကောင်းဘူးလေဗျာ
ဒေါသက ကျန်းမားရေးကိုလည်း ထိခိုက်စေတယ်ဗျ
စွဲလမ်းတာချင်းက ဘလော့ဂါတွေ အကုန်လုံး တူကြတယ်
ကျောင်းပိတ်ထားပြီမို့ စာတွေအများကြီး ရေးပါတော့
Candy March 30, 2013 at 9:42 PM
ထူးထူးခြားခြား တဂ်ပိုစ့်တွေ ဘာတွေရေးထားလို့ အပြေးအလွှား လာဖတ်ပါတယ် ရှင်...
ရွှေအိမ်စည် March 31, 2013 at 1:21 AM
မောင်လေးတောင် တဂ်ပို့စ်တွေ ဘာတွေရေးလို့
မိုးညချမ်း April 1, 2013 at 6:32 AM
တဂ်ပိုစ့်လေးကို ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးပါ မောင်လေး ၀ိုင်မိုးနေရေ ... အစ်မနာမည်တောင် ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ခေါ်မိတယ် ... မန်းညချိုး ဆိုလို့ပါ ... :)
၉၆၉၊ မိတ်ထီလာ၊ အကြမ်းဖက်ပဋိပက်ခနှင့် အစ်စလာမ်ဘာသ...